Rutger Bregman wuxuu ku baaqayaa in la sameeyo nidaam dawladeed oo fallaagoobay UN: Martin Vrijland
Rutger Bregman wuxuu ku baaqay in la sameeyo nidaam dawladeed oo fallaagoobay UN-ka
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 1 December 2019	• 8 Comments
Rutger Bregman, oo hadda ah qoraa caan ah adduunka, sababtuna tahay khudbadihi uu ka jeediyay Shirka Dhaqaalaha Adduunka, wuxuu ku bixiyay hadalo cajiib ah wareysigii ugu dambeeyay. Badanaa marka qof helo dareenka warbaahinta aad u badan, waxaan la macaamilaynaa qof riixaya ajendaha ka dambeeya maaskaro dhaleeceeyayaasha dhaleeceeya. Waxaan ku aragnay taas Greta Thunberg, waxaan taas ku aragnay Rutger. Waxaan hadda ognahay in ku saabsan Greta Thunberg awoowe-awoowe wuxuu curiyay fikirka diirimaadka adduunka wuxuuna ku abaal mariyey Nobel Prize, maxaa yeelay wuxuu iskaashi la sameeyay machadka abaalmarintaas. Svante Arrhenius kaliya kuma abaalmarin abaalmarinta Nobel, laakiin sidoo kale asxaabtiisa. Sayniska markaa waxay horeyba u ahayd arin laxiriira isla markaana aan run aheyn runtii.
Waxa cajiibka ah ee ku saabsan wiilka wadaadkan ah, Rutger Bregman, ayaa ah inuu yahay qof aad u hadal badan isla markaana ay tahay inaysan la yaabin in loo xushay tayada hidaha si loogu oggolaado inuu u dhaqmo sidii telefishan iyo wasiir kuxigeen ka ah kaniisada hoax cimilada iyo inuu qoro rumaystayaal badan. .
Wareysi ku saabsan websaydhka zwijgenisgeenoptie.be Rutger wuxuu sameeyaa bayaanno cajiib ah. Xaqiiqdii, wuxuu ku baaqayaa waddan wada-jir ah oo ku soo rogaya tallaabooyin adag xagga sare. Sawirkaaga masawirka, waxaan ku qortay qoraalka qoraalka wada hadalkaas hoosta. Si aad u daawato fiidiyowga, waa inaad marka hore uga tagto cinwaanka emaylkaaga websaydhadaas oo kaa dhigaysa bartilmaameedka wacdiyayaal wacdiyayaal ah oo ka tirsan kaniisaddaas cusub.
Hoos ka aqriso waxa Rutger ku duubay ereyada quruxda badan oona naftaada aamusnaan ku fahmid waxa dhabta ah ee loo hadlayo:
Isbedelka cimilada, wax walba run ahaantii way isbedelaan waxaanan la halgamayaa tan ugu badan markaan daacad noqdo. Marka aad ayaan ugu qanacsanahay muwaaddiniintaas, miisaaniyadda muwaadiniinta. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax la yaab leh wixii uu David sameynayay. Mana aha wax walba inay guuleystaan, laakiin way fiican tahay in lagu tijaabiyo jihadaas; aad u qurux badan ayaa dhacaya. Haddii aad u maleynaysid in muwadiniinta badankood kaliya waxay rabaan inay wax ku tabarucaan oo waliba waxay noqon karaan kuwo hal abuur leh, wax dhisi kara iyo hadaad fursad u siiso khubaro. Taasi runtii waa mid soo jiidasho leh! Iyo haddii wax waa daawo loogu talagalay jahwareerka, waa kaliya: in hal mar la joogo.
Isla mar ahaantaana tan ugu adag, markaad ka hadasho isbedelka cimilada, waa qodobka ah inaannaan waqti haysan. Waqti uun ma haysanno. Runtii waxaan nahay kuwa deg deg ah, deg deg, deg deg. Marka IPCC, aqoonyahannada cimilada ee UN-ka, ayaa leh: “Haddaad rabto inaad ku sii jirto hal digrii iyo badh? Haa, waa inaad sameysaa waxyaabo aan waligeed la arkin xilli nabad ah. " Markaa waa in lagu kala gooyaa 2030, caalami ahaan qiiqaaga; 2050 waa inuu noqdaa eber. Sidoo kale laba darajo waa inaanu .. haa markaa waxyaabo runtii waa inay isbedelaan.
Waana taas. Waxaad ka haysataa xigashadaas caanka ah Oscar Wild, kaasoo yiri: "Dhibaatada oo dhan ee xagga hantiwadaagga waa inay qaadataa fiidooyin badan." Waqti badan ayey qaadataa. Taasna waan ka walwalsanahay taas. Runtii waan ka walwalaa taas. Haddii aan haysanno waqti leh isbedelka cimilada.
Hadaad fiiriso abaabulka Mareykanka intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka. Taasi waa isbarbar dhig ay sameeyeen dhaqdhaqaaqayaasha cimilada ee dekada; van: “Waa inaan sameynaa taas. Abaabulka warshadaha. Haa, taasi kama shaqeynin jihooyinka muwaadiniinta. Ma sameyn kari weyday taas adiga oo abuuraya fahanka maskaxda ee heerka maxalliga ah, waad ogtahay. Qaabkaas uma shaqeynin. Taasi waxay ahayd hoos! Aruurinta tikniyoolajiyada adag ee Aqalka Cad iyo madaxweyne Roosevelt oo isku duubay. Iyo, hagaag, haddii aadan muwaadin ahaan ama ganacsi ahaan uga qayb qaadan, waa lagu ciqaabay! Taasi waa abaabulid!
Hadday dadku dhammaantiina hadda ku dhawaaqayaan xaalad degdeg ah - waad ogtahay, taasi waxay ka dhacdaa magaaloba mid ka dib markii wadamo kale ay horey sidaas u sameeyeen - markaa waxaan la yaabanahay: “Xaqiiqdii ma ogtahay waxa xaalad gurmad dhab ah ay tahay? waa? Miyaad garanaysaa waxa isku uruurinta dhabta ahi ay tahay? ”Taasi maahan 'Dhammaanteen waxaan wada fadhisan nahay miis wareega oo in yar ka fikirnaa waxaad dareemayso iyo sida aan dareemayo iyo sida aan u soo bixi doonno'. Taasi runtii waa wax kale! Taasi waa mid halis ah!
Waxaan halkaan ku aragnaa wajiga dhabta ah ee dhaqdhaqaaqayaasha cimilada kuwaas oo dhammaantood ku baaqaya in ay dhagaystaan ​​kaliya aqoonyahannada UN; saynisyahano sheegay in CO2 ay sabab u tahay diirinta adduunka, marka la barbardhigo saynisyahannadii arrintaas ka soo horjeedda, laakiin la dhaawacay (arag) halkan). Taasi wajiga dhabta ah waa in uu runtii dhaho in waqtiga uu aad uga gaaban yahay howlaha dimoqraadiga ah sidaa darteedna uu jiro nooc sharciga dagaal ee cabir caalami ah waa in lagu dhawaaqo.
In maqaalkani Waxaan sharxay sida kaabayaasheedu marwalba u ahayeen dariiqa hufan ee wadajirka. Dabcan fikradda daqliga aasaasiga ah, waxaa iska leh Rutger, sidoo kale waa fikrad wadaag ah. Maqaalkaas waxaan ku sharraxayaa sida ay taasi u tahay shuuc-wadaag shicib ah oo cajiib ah, laakiin sida fikradaha ka hooseeya dawlad farsamo ahaan (sida Rutger ugu yeerayo) had iyo jeer keento (ku tiirsanaanta) si buuxda u soo rogaya rabitaanka gobolka. Taasi maahan tiknolojiyad; taasi waa fasiisnimada. Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad si fiican u aqriso maqaalka hoosta xiriirkaas.
Wacdiyayaal kaniisadda cimilada waxay qof kasta oo si daran u fiirinaya mowduuca ku hoos dhigaan magaca 'cambaareynta' ama 'diidmada'. Summadaha dhanka midig ayaa sidoo kale si ku habboon loogu xiriiriyaa falsafadaas, si dadku (sida halkan ayaa lagu sharaxay) ugu dhakhsaha badan, haddii dhaqaaluhu isu rogo, oo fowdo bulsheed ay sabab u tahay, kooxdaas ayaa hal adeeg u bixi karta. Kooxdaas sumadda leh ayaa markaa la caayaa oo la gooyaa, si markaa loo hago xeryo dib-u-dhiska inuu baaba'o. Xaqiiqdii, Rutger Bregman wuxuu ugu baaqayaa tan si toos ah isaga oo tixraacaya Madaxweyne Roosevelt iyo ciqaabta adag ee qof kasta oo aan la shaqeyn.
Waxaan u dhaqaaqnaa dhanka gulag dijital ah oo adduunka oo dhan ah, kaasoo tallaabo kasta ah, isticmaalkiisa iyo xubin kasta oo fikir ah lagu kormeero sida ay tahay nooca Shiinaha. Miyaad dooneysaa inaad ogaato waxa ay umuuqdaan? Kadib guji halkan.
Buuggayga cusub waxaan ku sharaxayaa sida aan u joojin karno daahfurka qoraalka weyn. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fiirsato taas.
Soodhawrka xiriiriya: zwijgenisgeenoptie.be
Tags: Bregman, wargelinta, fashiistaha, fasiste, fasiste, featured, midna, caalamka, wareysi, IPCC, is, cimilada, isbedelka cimilada, doorasho, podcast, Roosevelt, Rutger, teknoolojiyadda, video, kululaynta, sayniska, saynisyahanka, iska aamus
1 December 2019 ee 13: 27
Faadumo waa fikir siyaasadeed oo asal ahaan awood leh, oo leh qarannimo xoog leh iyo aasaasi u leh aragti millatari. Fascismku wuxuu hormuud u yahay aragti shirkadeed oo ka soo horjeedda aragtida hantiwadaagga, oo loo habeeyey inuu ku qanco baahiyaha, qiyamka iyo ujeeddooyinka maaliyadda iyo shirkadaha, abaabulka dhaqaalaha iyo nidaamka siyaasadeed labadaba marka loo eego ajendaha.
Dawlad fallaago ah ayaa si firfircoon u joojisa wixii diidmo ka ah fikradeeda waxayna caadiyan burburin doontaa dhaqdhaqaaq kasta oo ka soo horjeedda. Iyada oo la ilaalinayo dabeecadooda qallafsan, dowladaha fasiqiiska ah guud ahaan waxay u arkaan rabshadaha iyo dagaalka inay yihiin kuwo kicinaya ruuxa iyo qarannimada.
1 December 2019 ee 14: 00
Waa maxay tusaale fiican oo ka socda Rutger oo lagu daro Khazar Roosevelt; Ninkii lahaa bamkii Atomka, ee uu naqshadeeyay Khazar JR Oppenheimer, ayaa lagu tuuray Japan, oo uu heshiis la galay Jarmalka, kaasoo ku qasbay Jarmalka inay ka falceliso, sidaasna uu America ugu rogay Dagaalkii Adduunka, sida uu qorshuhu ahaa qoyska reer Khazaren Mountbatten (Windsor's) iyo Winston Churchill, waa bastard ina Rothschild, kaasoo ugu dambeyntii doonayey inuu hoos u dhigo Jarmalka.
Horey ayey uga sameeyeen reer Russia 'yari'; Bolshevism waxaa maalgeliyey Rothschild iyo Rockefellers waxayna si xun u dileen qaar ka mid ah 70 milyan oo Masiixiyiin Masiixiyiin ah (maxaa?) Adoo siinaya 85% Koonfurta Ruushka Ashkenazi awood iyo hub.
Saliida ku taal Badda Caspian-ka ayaa la xaday, waxayna hadda gumaysataa Falastiin iyadoo dhibanayaal ka mid ah Yuhuuddu ay markale ugaarsanayaan Hitler, oo markaa siinaya marin u helidda Bariga Dhexe, oo hadda ficil ahaan 'siman'. Great Rutger!
Hadda dhammaan dadkaas belaayada lihi waxay dhulkoodii ka eryanayaan, iyagoo sababaya abaar iyo dab kaynta iyo xaalufinta; waxa loogu yeero 'Radar station' meelkasta oo ay joogaan 'cabir' cimilada. In kuwan loo beddelay aaladaha maareynta hawada oo markiiba 'roobka' dib ugu celin kara badda, ama dhab ahaan ugu diri kara weel dhulka iyo wixii la mid ah, haddaba ayaa laga heli karaa meelkasta oo aad ka joogto tubta iyo internetka.
Kaliya waxaan sameeyay falanqayn ku saabsan dabka weyn ee kaymaha Australia. All Radar waxay ku taal xeebta, roobka dhulka ka ilaaliya.
Bolshevism-ka cusub, Holomodor-ka cusub, Holocaust-ka cusub wuxuu hadda dhacayaa iyada oo la adeegsanayo khalkhalgelinta isdaba-joogga ah, "hagida khalkhalgelinta tamarta," aqoonta laga joojiyay jaamacadaha caadiga ah (maxaa yeelay waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa inaad ka hesho korantada hawada, guri kasta) , bilaash). Halka 5G iyo wax kasta oo nadiif ah 'junk' ay tahay inay dunida ka dhigaan 'nadiif' iyo 'shuuciyad' la Mao iyada oo loo marayo shucaaca xasilloonida. Waxaa mahad leh jinniyo sida Rutger.
Rutger; ama taariikh ma aqaan, ama lacag culus ayaa lagaa siinayaa, ama waxaad ka mid tahay isla dhaqan aad u fool xun oo duni qarniyo badan khiyaameeyay. Laakiin ma shaqeyn doonto. Weli waxaa jira "ruux" wixii ka dambeeya waxaas oo dhan; oo isna wuu idin dhammaystiray.
Mar labaad waad ku mahadsan tahay Martin Vrijland, indheergaradka indhaha u furay noocan ah 'khaa'imiyeyaasha adduunka'.
1 December 2019 ee 14: 14
Waa lagu soo dhaweynayaa waana ku mahadsan tahay isugeyntaada.
Oo haddii websaydhka "zwijgenisgeenoptie.be" filimka la damiyo ama la beddelo, ka dib ayaan heystaa hadda. Way go'an tahay waana inay caddaato waxa ujeeddada ka dambaysa ay tahay; in kasta oo Rutger shaki la'aan ku siin doono qallooc ama si fudud uma jawaabi doono.
Marka la eego kuwa hubka tamarta leh ee loo hago ama HAARP, taasi runtii waa wax dad badani u diidaan inay yihiin fikrad shirqool. Waxa xataa xiisaha lihi waa su’aasha ah in dababkaas kaymaha ah aysan si fudud halkaa uga jirin sannad walba iyo inay aad uga badan yihiin celceliska. Fadlan la soco: waxaan ka helnay aqoontaas (ku saabsan dababka ballaaran ee kaymaha) xagga warbaahinta sidaa darteedna waxba ma hubo.
Waa hubaal in isku-darka midabka (oo ay ka mid yihiin carqaladeynta jinsiyadda caddaanka ama isir kasta oo asal ahaan ah) oo ka mid ah qodobbada ajendaha, sida jahwareerka jinsiga ee ka dhexeeya qofka dhexdhexaadnimada jinsi (ee muuqaalka Lucifer).
PabloHein ayaa qoray:
1 December 2019 ee 14: 41
Fadlan ka dhaadhici runta runta naxdinta leh ee dadka u tixgeliya HAARP fikrad shirqool.
Inta badan waxaan ku dhejiyaa qodobbada xiisaha cimilada.
Laga soo bilaabo 1999, oo ka socota Midowga Yurub ee Brussels, caddaynta aan loo dulqaadan karin ee jiritaanka tikniyoolajiyadan.
Hoos u riix ilaa nus.
Akhri qaybta HAARP marka hore. Aqri waxkasta ka dib hadii aad dareento inaad jeceshahay.
1 December 2019 ee 15: 38
Warbaahinta ayaa go’aamisa
Ayaa meeshuu yuu yuu noqonayaa oo helayaa madal, diyaar u yihiin buro ahaan
Hadduu xitaa fadhiisan karo golaha Davos kuna biiri karo maamulaha aragtida Nieuwkerk DWDD iyo CNN iyo CBS markaa waad durba wax yar ka ogtahay arintaas. Si kas ah ayaan u geliyaa xiriiriyeyaasha maxaa yeelay ninkaasi uma qalmo dhageysi dhagaysi.
Maqaal aad u iftiimaya, mahadsanid
1 December 2019 ee 16: 06
Hagaag, Bregman wuxuu sheeganayaa inuu yahay guriga Protestant.
Waan hubaa inuu haysto guri kale. Qiyaas taas oo saddex jeer.
1 December 2019 ee 17: 16
Waxa Bregman macnaheedu yahay tikniyoolajiyad waa in loo adeegsado tikniyoolajiyadda lagu xakameynayo laguna xakameynayo baaxadda. Waxay ka baxaysaa fasiisnimada, wadajirka, iwm. Waa isku darka dhaqdhaqaaqyo kala duwan (siyaasadeed) iyo fikrado. Dhammaanteed waxay ku saleysan tahay cadaadis, waxaa loo iibin doonaa sidii shuuciyad ... icw kale ayaa lagu daray liiska.
Xalka wadajirka ayaa ah isku-darka ugu dambeeya ee lahjadda 1812 Hegelian.  Hegel wuxuu soo saaray in khilaafaadka u dhexeeya kooxaha ka soo horjeedaa uu dabiiciga u horseedo aadanaha inuu qabsado qaab falsafad-falsafad ah, kaamil ah fascist. Manifesto-ka Shuuciga 1848 wuxuu ballaariyay falsafadda Hegelian wuxuuna u beddelay luqadda lahjad ahaan. Khilaafaadka dabiiciga ah ee Marxist ee u dhexeeya dadka haysta iyo kuwa aan haysan ayaa daliil ka dhigaya rabshadaha iyo dilalka. Waxaa lagu beddelay 1884 si loogu daro daboolida, waxqabadka kicinta. Kani waa markabkii "Marxist" ee xaqiisa macnaha "aragtida". Fikradaha Hegel iyo Marx waxay ahaayeen aasaaska aragtida Stalin ee booliiskii Soviet-Ruushka iyo hanti-wadaagii Qaranka ee Hitler; labadooduba waxay ku dhaqmayeen borotokoolka cilmiga 'ka yar dadka.'
Wada-xiriirka bulshada ee siyaasadeed waxaa loo soo bandhigay adduunka sida Jidka Saddexaad ee 1990s. Waxa kale oo la yidhaa dimoqraadiyadda kaqeybqaadashada, isbedelka dimoqraadiyadda adduunka, dhinac-u-ekaanta, dhexe, xag-jir xag-jir ah, dheellitirnaan dheellitiran, dhaqan-dhaqaale, Glasnost-Perestroika iyo ereyo kale oo aan micno lahayn (sida maskaxda, bulshada ku saleysan, Caqiidada ku saleysan, "dareen cusub oo ujeedo," iwm) .). Gudaha Mareykanka, isgaarsiinta siyaasadeed, aragtida waxaa adeegsaday Golaha Hogaaminta Dimuqraadiga ee caalamiga ah (DLC). Qaarkeen baa laga yaabaa inaan maqalnay kani wuxuu ahaa "xisbiga" Clinton.
3 December 2019 ee 00: 35
macluumaad aad u fiican Riffian! Waxay mar kale muujineysaa nooca noocan ah ee luciferian-ka ah ee aan ku jirno, ee fikirka, caqli galnimada, bulshada si wanaagsan u shaqeyneysa, waxaad dhahdaa, bulshada sida dadka noocaan oo kale ah ee wax disha ma ahan in loo soo bandhigo marxalad ay kaga baxeyso dacaayaddiisa caalimiga ah ee adduunka. Uguyaraan buugyaraha soros-ka ah ee jawaabta hadallada waa in loogu adeego heer qaran ama caalami, laakiin waxgaradkaas dabcan MAANTA soo bandhigin marxalad maxaa yeelay qaybo ka mid ah doqonnimadooda iyo 'GREEN' guud ahaan ayaa lagu soo bandhigi doonaa waxa ay tahay, Quatsch!
« Dhiirrigelinta weyn ee Sinterklaas: yaab yaab leh oo qurux badan ayaa la duubay!
Tiknoolajiyadda casriga ah iyo maamulka teknolojiyadda casriga ah ee adduunka ayaa badbaadin doonta cimilada »
Guud ahaan Wadarta: 15.828.236
Dib-u-nooleynta iyo wareegga dhabta ah sida aan u aragnay
Wilfred Bakker op Intee in le'eg ayuu Trump ku jiray saddle hadda oo ay calaamadaha ugu horreeya ee dagaalka sokeeye ay muuqdaan?
SandinG op Nidaamka lidka diyaaradaha ee Iiraan ee qaatay Boeing 737-800 (dayuuradda PS752) ma la jabsaday?
falanqeeyaan op Nidaamka lidka diyaaradaha ee Iiraan ee qaatay Boeing 737-800 (dayuuradda PS752) ma la jabsaday?